Google iyo Audi waxay ku biireen xoogaga si ay u abuuraan gaari Audi ah oo wata nidaamka Android | Laga soo bilaabo Linux
Wararka si xawli ah ugu fidaya shabakada, isha ayaa xalaal ah (The Wall Street Journal) sidaas darteed, meel dambe oo shaki kuma jiro.
In badan oo idinka mid ah oo lagu rakibay gaari casri ah, oo wata qalab ama waxyaabo dheeri ah sida DVD-yada, 'kiniiniyada' ama shaashada taabashada oo lagu daray dhabarka kuraasta, nidaamka GPS, iyo aalado kale oo kuu oggolaanaya inaad xakameyso kuwa yaryar safarka, waad ka markhaati kici kartaa in qalabkani marar badan caawiyo, oo aanan ula jeedin kaliya inaan dejiyo carruurta, laakiin xulashooyin badan oo hagitaan ah, juquraafi ahaan, iwm, waa tan waxaan ula jeedo.
Gawaarida leh nidaamka noocan ah ayaa aad u soo noqnoqda maalin kasta, si kastaba ha noqotee Audi wuxuu damacsan yahay inuu wax yar sii socdo isagoo gacan ka helaya Google iyo Android.
Bisha soo socota ee Janaayo (maalmo yar haa) waxay damacsan yihiin inay soo bandhigaan dadaalkooda ku saabsan qaab dhismeedka CES (Macaamiisha Elektaroniga Show), oo lagu qaban doono Las Vegas inta u dhexeysa 7 iyo 10 bisha xigta.
Fikradda Audi waa in la siiyo gawaarida mustaqbalka nidaam madadaalo iyo macluumaad ku saleysan Android, maxaa yeelay fikradda sida uu qabo WSJ waxay noo sheegaysaa:
U oggolow darawalada iyo rakaabka inay galaan muusikada, marinka, codsiyada iyo adeegyada kale ee la midka ah kuwa hadda sida ballaaran loogu adeegsado taleefannada casriga ah ee Android.
Intaa waxaa dheer, sida laga soo xigtay isla isha waxay muujineysaa in Google uu la shaqeyn doono Nvidia:
in loo sameeyo Android tikniyoolajiyad muhiim u ah gawaarida mustaqbalka
Si kale haddii loo dhigo, faa'iidada ugu horeysa ayaa ah in gaariga uu ku shaqeyn lahaa Android, ma ahan sida moodooyinka qaar ee hadda jira oo leh fiilo aad ku xiri karto qalabkaaga Android gaariga iyo ciyaarida waxa aaladdaadu ka kooban tahay shaashadda, halkan Android si toos ah ayuu ugu shaqeyn lahaa gawaarida, sidaas darteed waxaa loo maleynayaa inay jiri doonto is dhexgal ballaaran.
Dhinaca kale, inta lagu guda jiro dhacdada Audi waxay bixin kartaa ogeysiisyo ku saabsan horumarkooda tiknoolajiyada wadista darawalnimada.
Maalin walba baabuurtu way caqli badan yihiin, taleefannada gacantu way ka caqli badan yihiin, laakiin kuwan oo keliya ma aha, qaboojiyeyaasha, qaboojiyaha, telefishannada, aalado badan ayaa maanta nolosha noo fududeynaya, halkee ayaan rabaa inaan ku tago tan? ... Ma ogtahay in qalabkan gudahood, Linux ay had iyo jeer shaqeyso? 🙂
Qayb kasta oo tikniyoolajiyad ah oo aan ku qaadanno ama ku isticmaalno guriga, kuwa marwalba si joogto ah u socda, horumar joogto ah, Linux waa qayb ka mid ah in badan oo ka mid ah, Toyota inyar ka hor waxay ka shaqeyneysay gaari Linux ah, hadda Audi wuxuu eegaa Android, U adeegso nidaamka noocan oo kale ah ee lala qabsan karo shaki la'aan waa mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu waaweyn.
Maxay kula tahay … Sanadaha soo socda (ama tobanaan sano), markaad iibsato ama kireysato gaari, adeegsiga Android waxay noqoneysaa dhibic wanaagsan sida aad adigu leedahay iyo in kale?
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Google iyo Audi waxay ku biiraan xooggooda si ay u abuuraan gawaarida Audi oo leh nidaamka Android
Anigu ma fahmin linuxers badan oo leh Google natiijada Google muxuu u keenayaa adduunka Linux? Waxaa laga yaabaa in la yiraahdo malaayiin iyo malaayiin taleefannada gacanta ah oo wata Android waxay isticmaalaan dhawaqa qabow, laakiin it ma waxay ku billowday kacdoon dhanka Linux ah? Xaqiiqda murugada leh ayaa ah in 90% dadka adeegsada Android aysan wax fikrad ah ka heysan waxa uu yahay kernel-ka Linux.
Iyo waxa ugu xun ayaa ah in Android ay noqoneeyso Microsoft-da cusub, OS-ga keligiis ah ee loo yaqaan 'monopoly OS' oo ku qasbaya soosaarayaasha iyo horumariyeyaasha barnaamijyada. Iyo sida Windows-ka oo kale, waxay baabi'isaa madaxa isticmaalaha. Wax fikrad ah kama hayaan waxa aan micnaha lahayn ee aad ka akhriso internetka. Bogga tiknoolajiyada, maqaalka Tizen, dadku waxay u maleeyeen inay tahay wax xun maxaa yeelay (sic) ma lahayn Google Play (!!!). Isticmaaluhu xitaa ma haysto nuuroonno ku filan si uu u ogaado sida doqonimadu u tahay inuu iska dhigo in horumariyaha uu qalab u adeegsanayo tartankooda. Laakiin haye, Google Play mar hore ayaa loo caleemo saaray inuu yahay isha dhammaan barnaamijyada u qalma nolosha madhan ee isticmaaleyaasha, kuwaas oo isku maaweeliya khiyaanadooda oo daboolaya xaqiiqda murugada leh ee shirkaddu ku wareejinayso madal diideysa xuquuq badan (iyo Waan ogahay waxa aan ka hadlayo maxaa yeelay waxaan haystaa kiniin Android ah).
Dhinaca Linux, wax cusub qorraxda hoosteeda ma jiraan. Dhammaantood waa sida dabada oo kale, oo u oggolaaneysa in qoolleydu baxsato Mu'asasada Linux waxay ilawday marka lagu daro kor u qaadida xayawaanka ka dhexjira soo saareyaasha qalabka, waa inay si xoogan ugu ololeeyaan kuwa soo saara barnaamijyada (yaa rabi lahaa barxad leh codsiyo yar?)
Anigu ma ahi Meelkasta oo ah taageere Android (maahan waqti dheer), aad ayaan uga yaraa Google, markaa waan fahamsanahay xoogaa sida aad u malaynayso. Si kastaba ha noqotee, fiiri tan: https://blog.desdelinux.net/sera-android-el-pequeno-robot-que-ganara-nuestra-batalla/
Google Play maahan heshiis weyn, maxaa yeelay lacag kuma siinayaan sida Apple ay bixiso marka aad sii deysid codsiyadaada lacag bixinta ah, kala qaybsanaanta dhabta ah ee udhaxeysa noocyadu waa mid aad u weyn.
Aynu aragno haddii dhowr bilood ay ka baxaan dekedda FF OS ee loogu talagalay Galaxy Mini (ama isku day inaad sidaas sameyso). Waxaan u adeegsadaa Android maxaa yeelay waa tii igu soo dhacday taleefankayga casriga ah, laakiin ma caabudo sida dad badani u maleeyaan.
Hadday aniga ahaan laheyd, waan joojin lahaa isticmaalka Google Play, laakiin maadaama aan ku tiirsanahay Google, Facebook iyo adeegyo kale, ka dib kaliya mudane.
Sikastaba, waa wax xiiso leh, laakiin haddii ay u sameeyeen darawallo bilaash ah oo shaqeynaya my Galaxy Mini, waxaan ku faraxsanaan lahaa inaan rakibo Replicant.
Macno malahan hadii la ogyahay in la isticmaalay iyo inkale, waxa muhiimka ah ayaa ah in isticmaalaha uu ka faa'iideysto isticmaalka Linux.
Muddo ka dib sida otomaatigga Audi ee G + "waxaan u baahanahay inaan saliidda gaariga ku beddelo", ama "imaanshaha (motel ad)".
Laakiin haye, maadaama Google uusan wax duullaan ah ahayn, waxaan u maleynayaa in qofna uusan ogaan doonin tan, aad ayaan u fahansanahay, waxaan u maleynayaa.
Mooyee (uma maleynayo sidaas) waxaad caado xun u leedahay inaad wax walba oo aad sameyso ku dhajiso baraha bulshada.
nacas… ka hadal Aodo oo sawir sawir honda ah ... waa hagaag ....
Waa tii ku soo baxday The Wall Street Journal 🙂
Maxayse tani ku xiran tahay Linux?
Waxay ila tahay talo soo jeedin xiiso leh inaan runta sheego, waligey kuma arkin wax google ah iyo hadii aan isku dayay nidaamka android, laakiin ma ogi, waxaa jira wax ku saabsan android oo i qancin karin waxna u lahayn ku samee qaybta garaafka, laakiin si wanaagsan waxaan rajeynayaa inay wax walba si fiican ugu shaqeeyaan google iyo aud, nooc baabuur oo aad u fiican Salaan!
Ha isku dayaan inay ku sameeyaan Haiku: http://haiku-os.org : trollface:
Sidee u fiicantahay inaad baabuur wadid oo si lama filaan ah aad u lumiso xakamaynta gaariga maxaa yeelay qof kale ayaa la wareegaya kantaroolka, iyo dhammaan isku xirnaanta xogta, markaad baabuur wadid?
Waa maxay ujeedka laga leeyahay?
Waxay ila tahay dibi dhac dhab ah
Marka aan sidaa u eego, waxaan qiyaasayaa dilal siyaasadeed iyo wixii la mid ah. Laakiin waxaan qiyaasayaa inaan marwalba ikhtiyaar u lahaan doonno inaannan baabuur ku iibsan tikniyoolajiyaddan, ama aan si uun uga qaadno.